Mate 20 Pro wuxuu helaa EMUI 9.0.0.126: waxaan sharxeynaa sida loo rakibo | Androidsis
Mate 20 Pro wuxuu helayaa EMUI 9.0.0.126 oo leh horumarin dhowr ah: waxaan sharxeynaa sida loo rakibo
Ka dib markii dhowaan la bilaabay cusub Huawei Mate 20, taas oo ah Mate 20 Pro (fiiri isaga dib u eeg halkan), Shirkadda Shiinaha ayaa si firfircoon u xayeysiinaysay xarumahan cusub iyada oo loo marayo ololeyaal suuq-geyn oo kala duwan, in kasta oo taasi keliya ku ekayn, laakiin sidoo kale hagaajinta qalabkan la xusay, kaas oo waxay heleysaa cusbooneysiin dhowr horumarin ah.
Sida wararku sheegayaan waxaa la bilaabay in laga qaybiyo wadamada Ingiriiska iyo Koonfur Afrika. Haddii aad horey u laheyd Mate 20 Pro, waxaad u maleyneysaa inaad ku heli doonto maalmo ama saacado kaliya. Waxa hubaal ah waa inaad ku dambayn doonto inaad haysato. Kadib, Waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta tan waxaanan kuu sharraxeynaa sida loo rakibo. Akhriska sii wad!
Cusboonaysiinta ayaa leh qaar astaamo cusub oo hagaajin doona shaqada kamaraddaada. Sidoo kale, waxay kuxirantahay shaashadda amniga cusub ee Oktoobar waxayna culeyskeedu yahay 491MB. Gaar ahaan, waxaan ka hadlaynaa nooca EMUI ee 9.0.0.126.
Sida laga soo xigtay isbedelka rasmiga ah, waxay keeneysaa shaandhooyin iyo saameyn dheeraad ah kamaradda Mate 20 Pro. Gaar ahaan, waxay ku darsadeen midab AI ah, Dhaweyn fiican, asal buluug ah, iyo ikhtiyaarro kale oo loogu talagalay kamaradda fiidiyowga taleefanka.
Sida loo rakibo EMUI 9.0.0.126 Huawei Mate 20 Pro
Waxaa xusid mudan taas waa cusbooneysiinta OTA oo masixi doonin mid ka mid ah macluumaadkaaga shakhsiyeed. In kastoo xilligan aysan jirin isticmaaleyaal badan oo moodalkan ah. Waxa laga yaabaa inay muddo qaadato in la gaadho dhammaan qaybaha.
Si aad u rakibto, marka hore waa inaad hubisaa haddii taleefanku horey u haysto. Si tan loo sameeyo, waa inaad tagtaa qaabeynta > Ku saabsan qalabka > Cusboonaysiinta nidaamka. Haddii la heli karo, waa inaan bilownaa hawsha soo dejinta iyo rakibidda waana taas. Waxaan aad ugu talineynaa in qalabka si buuxda loogu soo oogo kuna xirnaado shabakadda Wi-Fi si looga fogaado dhibaatooyinka oo aan loo isticmaalin xaashida xogta hawlwadeenka, maadaama maskaxda lagu hayo inay culeyskeedu yahay ku dhowaad 500 MB, oo ah qaddarin aan laga fiirsan karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Mate 20 Pro wuxuu helayaa EMUI 9.0.0.126 oo leh horumarin dhowr ah: waxaan sharxeynaa sida loo rakibo
Huawei wuxuu isku daraa sida nooca labaad ee ugu iibinta badan
Mar labaad ayaa la xaqiijiyay: waxaa jira waqti yar oo WhatsApp ay ku muujiso xayeysiis